6-80KVA Frequency Low Online UPS (3: 3)
Taxanaha Uranus Frequency Low Online UPS waa dhaqmaadka technology, taas oo ay weheliso DSP technology gacanta digital ugu horumarsan dunida ee hadda, iyo IGBT Pulse hirka sare Width isbedbeddelka farsamo (PWM) .Double-beddelidda design topology online ka dhigaa inta jeer ee wax soo saarka ee UPS, taas oo loo isticmaalo statistics, wajiga quful, jaangooyaha danab iyo shaandhayso soo baxay buuq, faragelinta ka isbedbedelka Roobka awood siin saafi ah awoodda la ruxruxo Culumida, oo waxaad ka samaysaa UPS ayaa in ka badan dhamaystiran oo si fiican ilaalinta isticmaalayaasha. Ka dib markii Prostar R & D elaborative xarunta loogu talagalay in ka badan 10 yeas, Prostar ayaa loogu talagalay qaab qaybsan, kuwaas oo socod guud ahaan waa 5 jeer waxqabadka more lagu kalsoonaan karo oo xasilloon badan UPS oo joogto ah, MTBF waa in ka badan 300,000 oo saacadood.
Taxanaha Uranus Frequency Low Online UPS qalabaysan gudbiyeyaasha go'doomin Heerka dhisay-saarka, biiro isku tallaalidda ma guurto ah oo ay gacanta ku ilaaliyaan biiro, samaynta taxanahan UPS uu leeyahay awood aad u dheer si ay u galaan in-circuit gaaban. Waxaa loo isticmaali karo jawi ugu xumaa. Sidoo kale waxa ay leedahay function.Moreover ilaaliyo kaamil ah, waxa ay leedahay talooyin AC ah, in ka badan-danab, danab hoos-, wax soo saarka badan-danab, ilaalinta circuit gaaban, inverter, rectifier ilaalinta in ka badan-kulka, danab digniin-danab ka yar, batariga ka badan ilaalinta amraya iyo xuquuqaha kale ee ka mid ah, si loo hubiyo in hawlgalka nidaamka stably oo loogu kalsoonaan karo.
Taxanaha Uranus Frequency Low Online UPS ka mid ah tago 3-waji iyo mooraal 3-waji ka HT6K-HT400K, kaas oo noqon kara in la isku midka ah 8 unugyada UPS si toos ah, ku haboon iyo si dhakhso ah. technology isku midka dabacsan ayaa laga yaabaa in laga codsadaa in ay xamuulka iyo systems.According kala duwan si ay baahida macaamiisha 'noqoneyso, waxa laga yaabaa N + 1 ama N + X dhismaha, laakiin sidoo kale sida ay baahiyaha kala duwan ee macaamiisha leh awoodda kala duwan, waxa laga yaabaa in sinnaan la UPS random 8 unug, iyo load oo dhan waa la shubi doonaa by dhan 8 unugyada UPS averagely nidaamka UPS siyaado ah ee isku midka ah. Kasta UPS nidaamka siyaado ah ee isku midka ah waxaa ku guuldareysatay, UPS isla markiiba la wadaagi doonto load, si loo hubiyo in nidaamka caadiga ah ordaya. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka ah ee UPS isku midka ah, waxa aanu ka dhigay ciidankii iyo heegan ka mid ah, laakiin waxaa loo doortay by macaamiisha furfurmi. The first on UPS jeestay waxaa si toos ah qarka u saaran inuu ciidanka, marka nidaamka ciidanka guuldareystay, aqoonsiga ciidankii isla markiiba loo gudbiyay UPS oo kale, oon hubinta bixinta korontada macaamiisha inta lagu guda jiro geeddi-socodka la isticmaalayo, sidaas darteed waxaa laga yaabaa inuu noqdo sahayda run uninterruptible xoogga.
1) DSP technology gacanta digital
nidaamka Core isticmaalaa technology ee caalamka ugu horumarsan oo dhan-digital gacanta DSP, kaas oo wax ku ool ah ballan qaadi karno nidaamka asaasiga ah UPS 'sax ah, iyo orodka dhakhso ah.
2) IGBT Advanced technology inverter
Isugeynta IGBT technology inverter sare-lagu kalsoon yahay iyo-oolnimada sare leh Pulse ee hirka sare Width isbedbeddelka technology (PWM).
Waxaa hoos u dhigi kartaa buuq iyo xoogga khasaare, si loo hubiyo in dadka isticmaala ku shuban kartaa noocyo kala duwan oo xaaladaha shaqada iyo aad u hesho wax soo saarka danab oo tayo sare leh iyo ugu badnaan qiimaha-oolnimada, laakiin sidoo kale ka dhigi oolnimada aqbasho in ka badan 95%.
3) ka daahirane-online technology diinta double
lagu kalsoon yahay oo deggan, ka dib markii geddigood iyo nidaamiyo, wax soo saarka la ruxruxo Culumida ka technology saafi-online diinta double, ma aha oo kaliya uu leeyahay filter xakamaynta qas ka atmosfeerta, laakiin sidoo kale la gudbiyeyaasha go'doomin saarka caadiga ah, isku tallaalidda ma guurto ah, isku tallaalidda dayactirka, ka dhigi soo saarka this awooda sare si ay u galaan soo wareegi hadda gaaban. Oo waxaa lagu saleyn karaa jawiga ugu xumaa ee shaqada.
4) ilaalinta Perfect
hawlaha ilaalinta Dhammaataan nidaamka: Waxay leedahay AC badan-danab, danab hoos-, wax soo saarka badan-danab,, dollar saarka, ilaalinta circuit gaaban, inverter danab hoos-, rectifier badan-kulka ilaalinta, digniin danab hoos-danab, batari badan ku amraya ilaalinta iyo xuquuqaha kale ee ka mid ah si loo hubiyo in nidaamka si stably oo loogu kalsoonaan karo shaqeeyaan.
5) xoogbadane Function Connection is barbar socda siyaado ah
design waara oo lagu kalsoonaan karo oo ah nooca warshadaha-dhismeedka qaybsan, weheliso hab digital buuxda gacanta DSP core technology, ka dhigi soo saarka this ma aha oo kaliya loo isticmaali karaa N +1 / N + X eryis iyo awoodda ballaadhi awoodda, laakiin sidoo kale la oggalaado awoodda kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan ee UPS uu noqon karo ee isku midka ah. Waxaa si weyn hoos kharashka user ee pre-iyo post-iibsiga, iyo kharashka awoodda kordhay, laakiin meelaha sare ee sii kordhaya awoodda sidoo kale la ballaariyey.
6) nidaamka awood isgaarsiinta
Heerka qalabaysan interface RS232, samayn Relays xiriir, qalab Beddelashada degdeg ah Epo aqbasho interface.
7)-xoog Low dhereg laakiin-oolnimada sare
Si loo gaaro in ka badan 98% ka mid ah ku-oolnimada aalladda sare hoos model dhaqaale Eco, kaas oo wax ku ool ah keeni karo xaddiga korontada, iyo wax ku ool ah iyadoo la raacayo shuruudaha diirada tamar-badbaadinta ah dalka.
8) habka digniinta Saadaasha
shaqada guddiga LCD la ogaado si toos ah iyo digniinta waqtiga ka hor, la shaqayn boot is-cudurka. Waxaa laga yaabaa inay ka fogaadaan khatarta qarsoon wakhtiga ay sabab u tahay UPS 'failure, oo ka dhigay in khatarta. Sidoo kale waxa ay si toos ah alarm by dejinta dheecaan batari inay heegan markii kari ka yar yahay qiimaha go'an.
9) guddi Humanized bandhigay
Humanized goobaha guddiga, dadka isticmaala dhigay kartaa beegyada uu nidaamka, taariikhda, danab wax soo saarka, awooda batariga, function alarm, xiritaanka light-load, waqti nidaamka boot, goobaha modem, sida amarada, sidoo kale waxay noqon kartaa ilaa 120 macluumaad failure aan caadi ahayn loogu talagalay dadka isticmaala inay su'aal.
10) jawi waafajinta Super-xoog
wax soo saarka waxa uu leeyahay waafajinta deegaanka ka xoogbadan, kala duwan oo la gelin AC ballaaran, si weyn u yaraynaysaa inta jeer ee la isticmaalayo batari, oo wax ku ool ah u fidiyaa nolosha batteriga.
11) Kartida dollar xoogbadane
Isticmaalka technology diinta double saafiga-online, la gudbiyeyaasha saarka go'doomin, isku tallaalidda ma guurto ah, iyo isku tallaalidda dayactirka.
Inverter dollar Kartida gaadhay wakhtigii soo raray si 110% / 125% / 150% socon karaa 300min / 10min / 1min.
Bypass dollar Kartida gaadhay 150% / 170% / 250% waqtiga socon karaa 60min / 10min / 1min Xammuul.
HT6K-HT30K (Saddex-tago iyo Saddex mooraal)
48 ~ 54dB (1 Distance)
53 ~ 60dB (1 Distance)
(marka laga reebo batari)
HT40K-HT80K (Saddex-tago iyo Saddex mooraal)
53 ~ 62dB (1 Distance)
3 weji 4 fiilooyin iyo dhulka, 380V ± 25%
3 weji 4 fiilooyin, 380V ± 1%
50Hz / 60Hz ± 0.05% (By Battery)
danab dheelitir la'aanta
load Balance = 1%, load dheelitir la'aanta = 3%
Wajiga xagal shif
load Balance = 1 °, load dheelitir la'aanta = 2 °
Output at 0 ~ ~ 50% 100% ≤5%, 10ms ≤ jawaab
foomka la ruxruxo
ruxruxo Culumida saafi ah
waqti ku amraya (Standard)
Input badan-danab, danab hoos-; dollar saarka, shortcircuit; Inverter badan-kulka, Battery danab hoos-, in ka badan-danab
Running heerkulka & Uumi
0 ℃ -40 ℃ Celsius degree, ka yar 95% (oo aan isu keenida)
<1000m (kordha ee 100m, waxaa hoos u dhigi doontaa wax soo saarka ee 1%) 4000m max
xiriir qallalan (low batari, Fasaxidda batari, bapass / eed), Epo
Epo iyo isku tallaalidda
IP20 (albaabka hore furay)
hab is barbar socda
N + 1, N + X, waxay noqon kartaa mid ay barbar socdaan awoodda xoog differenct
Dhanka dhexeeya fashilaad
Dustproof & dampproof, takooro transformer inverter, nuugista isxigxiga hillaac, daaro ma guurto ah, ku biiro maintainence Buugga
Financial Oo Securities
Boostada iyo Isgaarsiinta
Warshadaha Oo amarkooda canshuurta ganacsiga
Energy Oo Korontada
Medical Oo Health
Joogtaynta Uranus Taxanaha Low Online UPS 6KVA-400KVA
Previous: 100-400KVA UPS Frequency Low (3: 3) Next:90KVA qaybsan UPS (30U)
100-400KVA UPS Frequency Low (3: 3)